MDC yaVaNcube Inobudirira Kudzinga Nhengo Dzayo muCopac
Ndira 17, 2011
Imwe nhengo yekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muCopac, inoti Copac yawirirana kuti nhengo ina dzebato reMDC yava kutungamirirwa naVaWelshman Ncube dziri muchirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, dzisiye basa sezviri kudiwa nebato radzo.
Asi Copac yatora matanho ekuti MDC yaVaNcube inofanirwa kuzvipira kutakura mutoro unenge wakanangana nedanho iri. Nhengo idzi dzakanga dzanyorerana chibvumirano neCopac chekuti dzichashanda kudzamara kunyorwa kwebumbiro idzva kwapera, uye dzinenge dzichibhadharwa mari yadzo yeCopac.
Izvi zvinoreva kuti nhengo dzadzingwa idzi dzinenge dzotarisira kubhadharwa mari iri muchibvumirano dzadzo neCopac neMDC yaVaNcube.
MDC yaVaNcube yakanyorera Copac tsamba ichida kuti nhengo dzayo dzinoti VaMorgan Changamire, VaPatrick Muusha, VaOswell Dziike, pamwe naVaEnock Tsikai, vasiye basa sezvo vari kuramba kutambira kudomwa kwaVaNcube semutungamiri mutsva webato.
Mumwe wevana ava, VaMorgan Changamire, vanoti vacharwisa zvakasimba zvaitwa neMDC yaVaNcube izvi.
Nemusi weChishanu, mumwe wemasachigaro eCopac, vachimirira Zanu PF, VaPaul Munyaradzi Mangwana, vakati Copac yakanga yaramba kutambira chikumbiro chebato raVaNcube.
Asi neMuvhuro vakati havagoni kutaura nezvenyaya iyi, vachiti bato raVaNcube chete ndiro rinofanirwa kutaura nezvazvo.